Ny Ako mikasika ireo hetsika ara-Koltoraly | Tranonkalan'ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny Asatanana
Ny Ako mikasika ireo hetsika ara-Koltoraly
Fihaonana niarahana tamin'ny Ramatoa Johasy Eléonore, Minisitry ny Kolontsaina sy ny fampiroboroboana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny Vakoka, sy ny Fikambanan'ny Mpivarotra Mpanao Asatanana teny Andravoahangy
Nanao fitsidihana teny amin'ny tsenan'ny mpanao asatanana teny Andravoahangy ny Minisitry ny Kolontsaina sy ny fampiroboroboana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny Vakoka, Ramatoa Johasy Eléonore ny Alarobia 05 Desambra 2018. Izany no natao ho fampahafantarana ny atrikasa fanisana ireo mpivarotra mpanao asatanana.
FIHAONAMBEN’IREO TOMPON’ANDRAIKITRA CLAC ETO MADAGASIKARA
Atao eny @ ESPACE LION D’OR Anosy Avaratra ny 23 ka hatramin' ny 28 oktobra 2018 ny fihaonamben’ireo tompon’andraikitry ny CLAC manerana an’i Madagasikara. Ny CLAC moa na Centre de Lecture et d’Animation Culturelle dia ivokolo mijoro eny anivon’ny kaominina iray entina hampiroboroboana ny vaki-boky sy ny hetsika ara_kolontsaina. 27 ankehitriny no isan’ireo ivokolo ireo izay misandrahaka manerana ny faritra 17 eto Madagasikara. Isaky ny roa taona no hanaovana izany fihaonambe izany, ka mandray anjara amin’izany ny solontenan’ny komity mpitantana sy ny mpanentana avy @ ireo CLAC fitoambin’ny roapolo ireo. Marihina fa fandaharan’asan’ny Ministeran’ny Kolontsaina, ny Fampiroboroana ny asa-tanana ary ny Fiarovanany Vakoka iarahana @ vondron’ny tany mampiasa am-pahany na manontolo ny teny Frantsay na OIF io sehatr’asa io. Tonga nanokatra izany fihaonambe izany Ramatoa Ministry ny Kolontsaina, ny Fampiroboroana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny Vakoka, natrehan’ny solontenan’ny masoivohon’ny vondron’ny tany mampiasa am-pahany na manontolo ny teny Frantsay miasa eto Madagasikara sy ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny avy ao @ ministera sy ireo vahiny manak-kaja isan-tsokajiny izany lanonana izany.
Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO) : Andro natokana ho an'i Madagascar
Tontosa soamantsara ny asabotsy 27 octobra tontolo andro ny andro antokana ho an’i Madagasikara amin’ny maha « Invité d’honneur » azy mandritra ny SIAO 2018 . Izy irery ihany no nahazo io tontolo andro io entina hanehoana ny hakanton’i Madagasikara amin’ny alaln’ny asa tanana, zavakanto ary kolontsaina izay isan’ny mahasarika ireo firenena hafa aminy. Nanomboka ny maraina tamin’ny 9 ora ny fandraisana ireo olomanakaja maro avy amin’ny firenena marobe notarihin’ny Dg Siao, ambassadeur Burkinafaso, president de l'Assemble nationale Burkinafaso, sy ny solombavam-bahoaka ao aminy, minisitra maro avy amin’ny firenena hafa toa an’i Mali, nouvelle guinée, togo, ghana sns… Niavaka izany fandraisana izany satria ny tarika Vilon’androy no nanafana ny fandraisana notarihin-dRatoa Minisitry ny kolontsaina sy fampiroboroboana ny asa tanana ary fiarovana ny vakoka, Johasy Eleonore tamin’ny alalan’ny dihy malagasy izay tena nanaitra sy nakafizin’ireo vahiny tokoa. Trano heva miisa 15 no ahitana ireo vokatra malagasy any an-toerana ka misy ny asa tanana vita amin’ny rofia, vy, rary, lamba, ny fitafiana, harona, satroka, poketra, fehikibo, sy ny maro hafa koa. Azo lazaina fa nandeha tokoa ny tsenan’ny malagasy satria dia nahasarika ireo vahiny ny vokatra ka tsy nandalo fotsiny tamin’ny trano hevan’ny malagasy izy ireo fa dia samy nitondra nody avokoa. Nahavelom-bolo ary manandratra an’i Madagasikara sy manamafy ny fiaraha mientana sy fifandraisana amin’ireo firenena Afrikanina ny SIAO izay tsy nijanona tamin’ny sehatry ny asa tanana ihany fa nihitatra hatramin’ny indostria satria dia maro tamin’ireo mpandrahraha afrikanina no tonga tany an-toerana. Nofaranana tamin’ny hetsika sy fampisehoana ny hariva nanomboka tamin’ny fito ora io andro natokana ho an’i Madagasikara io ka ny mpanakanto malagasy Vilon’androy , Hasina, Deenyz no nanafana ny alina izay nampitsinjaka tanteraka ny mponin’ny Ouagadougou. Fanantenana sy fivelaran’i Magadasikara amin’ny sehatry ny asatanana sy indostria ny SIAO andiany faha 15 ity izay tafiditra anatin’ny fankalzana ny faha 30 taonany ihany koa. Marihina fa ny 4 novambra vao hifarana ny hetsika ary mbola hita any an-toerana avokoa ireo vokatra malagasy.
Fitsidihina aram-pomba fifanajana (10 Oktobra 2018)
Tonga nitsidika aram-pomba fifanajana sy nanatitra fanasana ny Ministry ny Kolontsaina sy ny Fampiroboroboana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny Vakoka , Ramatoa Johasy Eleonore teny amin' ny Tranom-bokim-pirenena Anosy ny Masoivohon' ny Repoblikan' ny Algerie, Andriamatoa Mokaddem Bafdal ny Alarobia 10 Oktobra lasa teo. Ramatoa Johasy Eleonore teny amin' ny Tranom-bokim-pirenena Anosy ny Masoivohon' ny Repoblikan' ny Algerie, Andriamatoa Mokaddem Bafdal ny Alarobia 10 Oktobra lasa teo. Fanasana avy amin' ny Ministry ny kolontsaina Algerianina sy ny Ministry ny Fanatajahan-tena, hiatrika ny fivoriana mikasika ny tanora sy fanatanjahan-tena ary kolontsaina aty Afrika. Fivorian’ny vondrona afrikanina izay hotanterahina any Alger ny 21 oktobra hatramin’ny 25 oktobra ho avy izao. "Ilaina ary tombony ho antsika aty Afrika io fivoriana io" raha ny nambaran-dRamatoa Ministry ny kolontsaina Johasy Eleonore, satria misy ny fandaharam-potoana (agenda) 2063 ny vondrona afrikanina. Ho fanomanana izany dia ilaina ny fametrahana paika sy politika mazava mikasika ny tanora sy ny kolontsaina. Azo antoka fa tanora avokoa mantsy no ho eo amin’ izany taona 2063 izany, ka mila mifototra amin’ny kolontsaina afrikanina sy ny firenena niaviany avy ary ny fanomanana mialoha ny fampitoviam-pijery ny toerana hametrahana azy ny tanora. Eo am-panomanana ny faha 64 taonany ihany koa ny Algerie amin’izao fotoana ka hisy fihaonana sy fanomanana manokana; hisy ihany koa ny tantara hiombonana amintsika Malagasy. Amin'ity andiany fahatelo ity dia hisy hatrany ny solontena izay hanatrika izany any an-toerana.
Arrivé de la délégation Burkinabé à Ivato (04 Octobre 2018)
Arrivé de la délégation Burkinabé à Ivato et visite de courtoisie auprès du Ministère de la Culture, de la Promotion de l'Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine ce 04 Octobre 2018
Valan-dresaka ho an' ny mpanao gazety (13 Septambra 2018)
Nisy ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety izay niarahana tamin’ny Ramatoa Johasy Eleonore, Ministry ny Kolontsaina sy ny Fampiroboroboana ny Asatanana, ary ny Fiarovana ny Vakoka, anio Alakamisy 13 Septambra 2018 tao amin’ny efitranon’I Gisèle Rabesahala. Izany nitondran'i Ramatoa Ministre fanazavana mikasika ny filazana tany amin'ny tambazotran-tserasera "Facebook" ny zoma 7 setembre 2018, fa nisy nahita tany Paris, Frantsa ny satro-boninahitry ny Mpanjaka Ranavalona I. Noresahina tao ihany koa ny fiadiana amin’ny hosoka na ny “Anti-piratage”, izay efa andraisan’ny Ministera andraikitra, satria hatramin’ny boky koa aza dia hanjakan’izany hosoka izany. Ary farany, ny fivoahan’ny didy vaovao teo amin’ny “Patrimoine immateriel”.
Ambasadaoron' ny Japana (22 Aogositra 2018)
Nanatanteraka fitsidihina, ara-pomba fifanajana, ny Minisitry ny Kolontsaina, ny Fampiroboroboana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny Vakoka Ramatoa Johasy Eleonore ny Ambasadaoron’ny Japana, Andriamatoa Ichiro Ogasawara ny Alarobia 22 Aogositra 2018 tao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy. Noresahina nandritra izany ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana“Japonais” sy Malagasy indrindra amin'ny lafiny kolontsaina sy ny vakoka. Nasongadina tao ihany koa ny sehatry ny horonantsary, ary ny hetsika fandefasana horonantsary Japonais izay karakarain'ny masoivohon'ny Japana ny 8 septambra ho avy izao ao amin'ny IFM.
Fizarana mari-pahavitan'ny fiofanana (22 Aogositra 2018)
Notanterahina teo ambany fahefan-dRamatoa Johasy Raharisoa Eleonore, Ministry ny Kolontsaina, ny Fampiroboroboana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny vakoka , ny 22 Aogositra 2018, tao amin' ny efitrano malalaky ny "Académie national des Sports" Ampefiloha, ny lanonan'ny fizarana mari-pahavitan' ny fiofanana izay nokarakarain' ny Ivon-toeram-pirenen'ny Asatanana Malagasy, fantatra amin'ny hoe "CENAM". Nasalotra ny anarana EZAKA ity andiany navoaka ity, izay nahitana mpiofana miisa 282 mizarazara isam-paritra: 16 tany Diana, 22 tany Atsinana, 24 tany Boeny, 79 tany Vatovavy Fitovinany ary 151 teto Analamanga. fa ny pari-pahavitan' ny Fiofanan'ireo mpiofana 151 teto Analamanga no nozaraina androany. Ny tanjon' ny CENAM dia ny fanomezan-danja ny fiofanana arak'asa, ka hitondra vokatra mivantana sy haingana ho amin' ny isan-tokantrano sy ny fianakaviana. Ireto avy ireo karazam-piofanana narahin'ireo mpiofana:
Zaitra (coupe et couture)
Rafitra vy sy hazo (ouvrage métallique et bois)
fanodinana ny taratasy sy plastika ho tao-zavatra (recyclage des déchets non biodégradables)
Ambasadaoron' ny Afrika Atsimo (21 Août 2018)
Nanatanteraka fitsidihina ara-pomba fifanajana ny Minisitry ny Kolontsaina, ny Fampiroboroboana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny Vakoka, Ramatoa Johasy Eleonore ny ambasadaoron' ny Afrika Atsimo, Ramatoa Vuyelwa Maud DMOLO io hariva io tao amin' ny Tranombokim-pirenena Anosy. Nodinihina tamin'izany fihaonana izany ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo anivon' ny Ministeran' ny Kolontsaina an'i Madagasikara sy ny Ministeran' ny Kolontsaina an'i Afrika Atsimo. Noresahina koa ny momba ny hetsika mikasika ny Andro iraisam-pirenena ho an 'ny Vakoka izay hotanterahina ny volana Septambra ho avy izao izay ahitana ny hetsika Festival mikasika ny sakafo sy ny Mozika izay fanao isan-taona. Nohamafisina tao ihany koa ny hetsika momba ny fankalazana ny andron' ny vehivavy ao Afrika Atsimo ny 29 Aogositra ho avy izao, nampitondrana ny lohahevitra: "feon' ny firaisankina" izany mba ho fampandraisana anjara ireo vehivavy amin' ny fampandrosoana ny firenena. Hisy ihany koa ny fifampizarana ny momba ny taovolo "Curly".
Ambasadaoro Frantsay (09 Août 2018)
Tonga nitsidika, ara-pomba fifanajana, ny Minisitry ny Kolontsaina, ny Fampiroboroboana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny Vakoka Ramatoa Johasy Eleonore ny ambasadaoron’ny Frantsa Ramatoa Véronique Vouland-Aneini ny Alakamisy 9 Aogositra 2018 tao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy. Noresahina nandritra izany ny fampisehoana goavana an’ireo harem-pirenena Malagasy amin’ny lafin’ny kolontsaina izay hatao any Paris amin'ny volana Septambra ho avy izao. Ny tanjona amin’izany hetsika izany dia ny fanehoan’ny malagasy ny talentany sy hampahafantarana ny harem-pireneny amin’ny firenena maro.
Ambasadaoron’ny Repoblikan’i Korea (08 Août 2018)
Nisy ny fihaonana teo amin’ny Minisitry ny Kolontsaina, ny Fampiroboroboana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny Vakoka Ramatoa Johasy Eleonore sy ny Ambasadaoron’ny Repoblikan’i Korea Andriamatoa Pil Woo Kim ny Alarobia 8 Aogositra 2018 tao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy. Noresahana nandritra izany ny Hetsika ara kolotoraly izay ho karakarain’ny firenana Koreanina eto amin-tsika amin’ny fiatombohan’ny volana Septambra hoavy izao ka hanasan’i Masoivohon’i Korea an-dRamatoa Minisitra Johasy Eléonore mba hanatrika izany sy ny fitoizan’ny fiarahamiasa eo amin’ny roa tonta indrindra.
Fanolorana boky fianarana (21 juillet 2018)
Fifanarahana (20 Juillet 2018)
Fifamindram-pahefana ( 14 Juin 2018)
Fifampiarahabana tratry ny taona: Kianjan’ ny kanto
Fifampiarahabana tratry ny taona izay nataon’ireo mpanakanto sy Andriamatoa Jean Jacques Rabenirina Ministry ny Kolontsaina, ny Fampiroboroboana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny vakoka teny amin’ny Kianjan’ny kanto Mahamasina ny Alarobia 21 Febroary 2018
Andriamatoa Jean Jacques Rabenirina Minisitry ny Kolontsaina,ny Fampiroboroboana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny Vakoka miaraka amin’ireo solotenan’ny mpanao Asatanana naneho sy nanasongadina ny hasina sy ny lanjan’ny asatanana Malagasy tany Inde. Nampirantian’izy ireo tamin’izany ireo karazana asatanana malagasy toy ny landy,ny vato,ny tandrok’omby sns indrindra ny fanehoana ny fomba fandrariana rofia izay nahatalanjona tokoa ireo vahiny. Nahazo amboara (tromphé) sy mari-pankasitrahana tamin’izany izy ireo
Fanolorana mari-boninahitra (21 Febroary 2018)
Notanterahina ny Alarobia 21 Febroary 2018 ny fanolorana mari-boninahitra ho an’ireo mpanao asatanana mpikambana ao amin’ny salohin’Iarivo izay manao ny lalam-pihariana (filière) « Textile et habillement » izay nataon’Andriamatoa Jean Jacques Rabenirina Minisitry ny Kolontsaina, ny Fampiroboroboana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny Vakoka tao amin’ny Direction Générale de l’Artisanat 67ha.« Andrianiko ny asatanana; ny vita gasy vitsy mpanana » izany no ambentin-dresaky ny Tale Jeneralin’ ny Asatanana nandritra izany hetsika izany.Izany no natao mba hankasitrahana sy hanandratana manokana ny ezaka vitan’ireo mpanao asatanana.
"Adidy ny mitadidy" (29 Martsa 2017)
Adidy ihany koa ny mampihatra ny fitiavan-tanindrazana amin'ny fiainana andavanandro sy ny ny asa. Nosokafana anio ny fampirantiana sary momba ny tolopiavotana 29 Martsa 1947 etsy amin'ny Tranombokim-pirenena Anosy. Ny lanonam-panokafana dia natao ambany fiahian'ny Praiminisitra Lehiben'ny Governemanta Olivier Mahafaly Solonandrasana, notronin'ny Ministeran'ny Serasera sy Fifandraisana amin'ny Andrimpanjakana, izay mikarakara ny hetsika amin'ny alàlan'ny ANTA, ny Ministeran'ny Fiarovampirenena, nosolointenan'ny Sekreterampanjakana misahana ny Zandarimariampirenena, ny Antenimierandoholona, ary nampiantranoin'ny Ministeran'ny Kolontsaina, Fampiroboroboana ny Asatanana, sy Fiarovana ny Vakoka.
Andro iraisam-pirenena hoan’ny poezia (21 Martsa 2017)
Natao ny 21 Martsa 2017 ny fankalazana ny « andro iraisam-pirenena hoan’ny poezia », tao amin’ny Tranombokimpirenena Anosy (Efitrano Gisele Rabesahala), nanantrika izany ny solotena eto anivon’ny Ministeran’ny Kolontsaina, ny Fampiroboroboana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny Vakoka toan’Andriamatoa sekretera Jeneraly, Ramatoa Tale Jeneraly ny OFNAC… Niavaka ny hetsika tamin’ity taona ity satria dia nomarihina tamin’ny Atrik’asa sy fiantsana tononkalo izany. Nandritra izany fotoana izany dia nisy ny Atrik’asa izay nizaran’ireo mpanoratra tononkalo zokiny toan-dry Fanja Razah, Avelo Nidor, Rima ary Ny Eja ireo traikefa hananany hoan’ireo mpanoratra tononkalo zandriny sy ireo mpianatra izay nanatrika ny fotoana ,nisy ihany koa ny fiantsana tononkalo isan-karazany.
Fihaonan' ny Mpanoratra (22 Aprily 2016)
Ao anatin’ny fankalazana ny andro erantany ho an’ny boky sy ny zon’ny mpamorona ; ny Sampandraharaha misahana nyTeny sy ny Soratra eo anivon’ny Minisitera misahana ny Kolontsaina miara-misalahy amin’ny Federasiona Mpikanto ny Teny sy ny Soratra dia nanatontosa ny fihaon’ny mpanoratra ny zoma 22 Aprily 2016 tao amin’ny efitrano Gisèle Rabesahala Tranombokim-pirenena.
Nizara roa mazava tsara ny fandaharam-potoana. Velakevitra samihafa no nanombohana izany ary niompana indrindra tamin’ny mpanoratra, ny fanontana ny boky, fanapariahana izany , hatramin’ny fivarotam-boky , tsy nohadinoina ny mikasika ny zon’ny mpamorona . Ireto avy ireo nanao ny velakevitra:
*Rado Ramaherison , Mpanoratra, Faribolana Sandratra *Pastora Ramanantsoa Haja, TPFLM
*Ramalanjaona Voahirana, Filohan’ny ALM
*Razafintsalama Michèle, filohan’ny AEDIM
*Rasolonirina Zo Mihary, Tranombokim-pirenena
*Nalisoa Ravalitera, filohan’ny sendikan’ny mpanoratra
Ny fizarana faharoa no nisian’ny adihevitra sy fametrahana olana samihafa tokony hovahana mba hampanjary ny tontolon’ny mpanoratra sy ny boky. Tsara ny manamarika fa nandray anjara mivantana tamin’ny famaliana ireo fanontaniana mikasika ny zon’ny mpamorona ny lehiben’ny sampandraharaha misahana izany ao amin’ny OMDA Atoa Rarison Manitra.
Ny tanjon’izao fihaonana izao dia ny hampahafantarana ny mpanoratra ny mahazava-dehibe ny tontolon’ny ara-dalàna eo amin’ny rohim-boky.Ny fametrahan’mpanoratra ireo hetahetany anisan’ireny ny tokony hamerenana ny faribolan’ny mpanakanto izay hevitra niverimberina tao anatin’ny tafa sy dinika. Toa mahatsiaro mantsy izy ireo fa anjorombala ihany miohatra amin’ny mpanakanto hafa.Maniry ihany koa ny mpanoratra ny mba hisian’ny fitohizan’ny asa eto anivon’ny Minisitera misahana ny Kolontsaina satria lesoka hatrany ny tsy fisian’izany noho ny fiovaovana hatrany eo amin’ny mpitantana ny Minisitera.
Santabokatry ny mpanao Asatanana (22 Aprily 2016)
Ny 22 ka hatramin’ny 24 Aprily 2016 no nanatontosan’ireo mpanao asatanana isan-tsokajiny manerana ny nosy ny varotra fampirantiana tao amin’ny « Petit Palais Mahamasina », ka naranty nandritra izany ireo asatanana maro, toy ny akanjo, sary (portrait), kojakoja isan-karazany fampiassa ao antokantrano sy ny maro hafa.Tanjona nadritra ny hetsika ny hanome sehatra sy lalam-barotra ho an’ny mpanao asatanana Malagasy, ary ihany koa ho fampahafantarana ny rehetra ny vokatra vita Malagasy.Andriamatoa RABETOKOTANY Eugene sekretera jeneralin’ny Minisiteran’ny Kolontsaina sy fampiroboroboana ny asatanana ary fiarovana ny vakoka moa izay nisolo tena ny Minisitra RABENIRINA Jean Jacques dia nanamafy fa manana ny talentany tokoa ny mpanao asatanana Malagasy ary samy manana ny maha izy azy ny faritra rehetra misy eto Madagasikara, ary nampirisika ihany koa izy mba hanatsarana hatrany ny kalitaon’ny asatanana na ireo aondrana any ivelany na ireo eto an-toerana.Ny fanjakana moa amin’ny alalan’ny Minisitera dia vonona hatrany ny hanampy ny mpanao asatanana Malagasy.
Famindram-pahefana (19 Aprily 2016)
Androany 19 aprily 2016 no notanterahana tao amin’ny tranombokim-pirenena Anosy (efitrano rado) ny famindram-pahefana teo amin’ny: andaniny, ny Minisitra teo aloha ANDRIAMOSARISOA Jean Anicet sy ny Minisitra vaovao RABENIRINA Jean Jacques.
Tamim-pirahalahiana tokoa no nanatanterahan’izy ireo izany, nampanantena fiaraha-miasa matotra sy fifanakalozan-kevitra hoan’ny mpiasa sy ireo mpiara-miombonantoka rehetra ny Minisitra vaovao, nilaza ihany koa izy ny hijerena manokana ny kolontsaina, ny asatanana ary ihany koa ny vakoka izay tsy hisy atao tombo sy hala satria samy manana ny lanjany eo amin’ny fampandrosoana ny firenena Malagasy avokoa.
Fampirantiana Tahirin-tsary (24 Martsa 2016)
Notanterahina tao amin’ny tranombokim-pirenena Anosy ny 24 marsa 2016 ny fampirantiana sary sy fandefasana horonan-tsary nandritry ny tolona 29 marsa 1947. Daty manan-tantara eo amin’ny firenena malagasy ny 29 marsa 1947 ka izany indrindra no antony namoahan’ny ANTA (Agence Nationale d’information TARATRA) ireo sary voatahiriny. Ity fampirantiana sary ity dia natao hanomezana hasina ny firenena, hamelona indray ny tantaran’ny tolona ho an’ireo taraka faramandimby, ary ho fahampafantarana ny firaisan-kina sy firaisan’ny fo ho fitiavan-tanindrazana tamin’izany.
Andro eran-tany ho an' ny Angano sy Poezia (21 Martsa 2016)
20 marsa, andro eran-tany hoan’ny angano sy poezia. Notontosaina tao amin’ny efitrano Rado - Tranom-bokim-pirenena Anosy ny 21 marsa 2016 ny fankalazana io andro io sady fankalazàna ny andro eran-tany ho an’ny tononkalo koa ny 21 marsa. Nahitana fandraisam-pitenenan’ireo manampahefana maro, toa an’Andramatoa Sekretera Jeneralin’ny UNESCO, Andriamatoa Ministry ny Kolontsaina sy ny Asatanana izay samy nanandratra avo ny angano sy poezia malagasy.
Nisy koa ny fanolorana marim-pankasitrahana hoan’ireo mpanao tononkalo efatra notsongaina, izay zokiny sy zandriny indrindra sy avy any amin’ny faritra. Tao koa ny fitsidihana ireo fafana momban’ny angano sy poezia ary koa ireo tomban’ezaka natao nandritry ny hetsika tononkalo (fitetezana sekoly).
Ity hetsika ity dia noravahina antsan-tononkalo maro notontosain’ireo mpanao tononkalo.
Fankalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny Tenim-pirenena ibeazana/Tenin-dreny (19 Febroary 2016)
Androany 19 febroary tao amin’ny Akademia Malagasy no nanatanterahana famelabelaran-kevitra mikasika ny tenin-dreny ka nasongadina tamin’izany ireo ohabolana sy ny fomba amam-pitenenana malagasy izay nomarihana fa tsy avy eto anivontany ihany no ahitana azy fa any amin’ny faritra ihany koa, hetsika izay nataon'ny sampandraharha misahana ny teny sy ny soratra anivon'ny sekoly ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tenin-dreny, nandray anjara tamin’izany ny Miniteran’ny Kolontsaina sy ny Asatanana tamin’ny lahadinika nataon-dramatoa RAKOTOMAVO Tsiky Milamina ka nilazany ny anjara toeran’ny ohabolana eo amin’ny fanabeazana tamin’ny alalan’ny lohahevitra nentiny : (Ny ohabolana Malagasy haren-tsaina manabe), anisan’ny nandray anjara ihany koa ireo kalaza eo amin’ny asa soratra, toa an’i :
Rahaingoson Henri (Ny fahasamihafan’ny ohabolana sy ny fomba amam-pitenenana),
Esther Randriamamonjy (Mampiray volo ny firenena ireo ohabolana momba ny vary),
Andrianasolo Benoît (Ny rohin’ohabolana Malagasy).
Tanjon’ny hetsika ny fandraketana angona ohabolana sy fombam-pitenenana vaovao na tranainy satria maro amin’izy ireny no tsy fantatry ny maro amin’izao fotoana iainantsika izao.
Fampirantiana mikasika ny teny reny (09 Febroary 2016)
Nosokafana tamin’ ny fomba ofisialy tao amin’ny Alliance Française Andavamamba ny fampirantiana fafana 32 isa, mikasika indrindra ny « tenin-dreny », izay entina hanomezan-danja ny kolontsaina Malagasy. Fiaraha-miasa izay misy eo amin’ny Alliance Française (mampiantrano ny fampirantiana) sy ny minisiteran’ny kolontsaina sy asatanana, (mpikarakara), ity farany moa izay nosoloin’dramatoa tale jeneralin’ny kolontsaina RAHARIMANANA Emeline ka tamin’ny teny fohy nataony no nilazany fa ny tenin-dreny no entina mampiroborobo ny kolon-tsaina, ary ny kolon-tsaina no maha Malagasy. Mbola haharitra andro maromaro ity hetsika ity izay natomboka androany 09 febroary ary tsy hifarana raha tsy ny 25 febroary ho avy izao.
Varotra fampirantiana Asatanana Malagasy (09 Febroary 2016)
Ho fankalazàna ny andron’ny mpifankatia ary ho fanehoana fa tsara sy tsy mena mitaha amin’ny vokatra avy any ivelany ny vokatra vita Malagasy, dia misy hetsika varotra fampirantiana vokatra asatanana Malagasy izay karakarain’ny Minisiteran’ny Kolontsaina sy ny Asatanana hoan’ny mpifankatia ao amin’ny Tahala Rarihasina Analakely ny Talata 09 febroary 2016 hatramin’ny Alakamisy 11 febroary 2016 . Marihina fa mandray anjara amin’io hetsika io ireo mpanao asatanana avy ao amin’ny COUM 67ha, Association tsy misara mianakavy ary CENAM .
Tontosa ny 09 Febroary 2016 ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ity hetsika ity ka tonga nanatanteraka izany ny Secretera Jeneraly ny Minisiteran’ny Kolontsaina sy ny asatanana, izay solotenan’Andriamatoa Minisitra. Nambarany nandritra ny lahateny izay nataony fa manohana hatrany ireo mpanao asatanana Malagasy ny Ministera ary santatra ambava rano ihany izao hetsika izao fa tsy maintsy hoavy ny hetsika isan-karazany izay karakarain’ny Minisitera mba hanehoan’ireo mpanao asatanana ireo vokatra vokariny .
Ankoatra ny varotra fampirantiana dia hisy ihany koa fifaninanana hoan'ny mpifankatia ny alarobia 10 febroary .
Fambolen-kazo (05 Febroary 2016)
Ny Zoma 05 febroary 2016 tany amin’ny vohitra Ambohimanga no nanatontosan’ny mpiara miasa eto anivon’ny Ministeran’ny Kolontsaina sy ny Asatanana ny fambolen-kazo izay fanao isan-taona. «Ampoky ny soa indrindra toy ny mpamboly hazo sady manan-kantenaina no manan-kialofana », io no lohahevitra nombanjinina nandritra ity fotoana ity. Ny OSCAR na ny « Office du Site Culturel d’Ambohimanga Rova » no nikarakara ny hetsika, izany no natao dia ny mba ho fandraisan’ny Ministera anjara amin’ny fikajiana ny harena voajanahary.
Fametrahana vato fehizoro tamboho eo amin’ny Mozea Andafiavaratra (21 Janoary 2016)
Anisan’ny tanjon’ny Ministeran’ny kolontsaina sy ny Asatanana ny hanamafy ny fiarovana ireo vakoka manan-tantara eto Madagasikara, tafiditra ao anatin’izany ny mozea an’Andafiavaratra.
Ny 21 janoary 2016 tao amin’ny Lapan’Andafiavaratra no nanehoana indray ny fahamatorana amin’ny fiaraha-miasa misy eo amin’ny Ambasady Amerikana sy ny Ministeran’ny Kolontsaina sy ny Asatanana. Nanolotra vola 32 545 dôlara ny masoivoho amerikana mba hanamboarana tamboho sy vavahady vy, hametrahana jiro fanazavana eny ivelany, fitiliana sy famonoana afo… tamin’io fotoana io no nametrahan’ny Minisitry ny kolontsaina sy ny asatanana Brigitte Rasamoelina sy ny Ambasadaoro Amerikana ny vato fehizoro ho fanamarihana ny fiatombohan’ny asa.
Tsy vao izao no nisian’ny fiaraha-miasa teo amin’ny roa tonta fa efa nisy izany ny taona 2005, izay niompana tamin’ny “Fikajiana ireo tahiry lamba landy tao amin’ny Lapa an’Andafiavatra”, ny taona 2008 “Fikajiana ireo hira sy dihy nentim-paharazana” ary izao dia ny”Fikajiana ho fiarovana ny Lapa Andafiavaratra”.
Atrik'asa OMACI (13 Janoary 2016)
Notontosaina tao amin’ny tranombokim-pirenena ny 13 janoary 2016 ny atrik’asa ho fiadiana amin’ny hosoka na “piraty”, izay notarihin’Andriamatoa Tale ny OMACI sy ireo mpanao sarimihetsika Malagasy (mpilalao horonan-tsarimihetsika, mpanatontosa horonan-tsarimihetsika, trano mpamokatra horonan-tsarimihetsika) izay natrehan-dRamatoa Minisitry ny Kolontsaina sy ny Asatanana sy ny Talen’ny kabinetra eo anivon’ny Ministera. Nisy ireo soson-kevitra naroson’ireo mpanao sarimihetsika hanafoanana ny hosoka, ka anjaran’ny tompon’andraikitra eo amin’ny Ministera kosa no handinika izany ary hamaha ny olana araka izay tratra.
Akoatra io hatrik’asa io dia nampahafantarin-dRamatoa Ministra tao ihany koa ny fiarahamiasa naroson’i Ambasadaoron’ny Torkia izay mikasa hanangana trano fijerena sarimihetsika na “salle de projection” eto amintsika.
Famaranana ny varotra fampirantiana Asatanana (11 Desambra 2015)
Ny Zoma 11 Desambra 2015 no namaranana ny varotra fampiratiana vokatra asatanana tao amin’ny Ivon-toeran’ny Kolontsaina Malagasy (IKM) Antsahavola. Nisy nandritra izany fizaràna loka hoan’ny mpanao asatanana izay nanao famorona asatanana tena naneho ny kolontsaina Malagasy sy mendrika indrindra, mpifaninana 38 avy amin’ny faritra 22 no nandray anjara tamin’ny fifaninana ary mpanao asatanana avy any amin’ny faritra vakin’Ankaratra no nibata ny amboara.
Varotra fampirantiana Vokatra Asatanana (08 Desambra 2015)
Ny 08 desambra 2015 ka hatramin’ny 11 desambra 2015 no hanatanterahana ny varotra fampiratiana vokatra asatanana maneho ny kolontsaina Malagasy izay karakarain’ny Ministeran’ny kolontsaina sy ny asatanana ao amin’ny Ivo-toeran’ny Kolontsaina Malagasy (IKM) Antsahavola.
Mpanao asatanana manerana ny faritra 22 no mandray anjara mandritra ity hetsika ity, hisy ny fifaninana atao mandritra izany ka izay vokatra asatanana tena maneho sy mamoaka ny kolontsaina Malagasy no ho mpandresy.
Ny tanjona dia ny fanomezan-danja ny asatanana mivohy ny kolontsaina Malagasy.
Varotra Fampisehoana ( 01 Desambra 2015)
Ny talata 01 volana Desambra 2015 ka hatramin’ny talata 08 Desambra no nototontosaina tao amin’ny efitranon’ny « Chambre de Commerce et de l’Industrie Antaninarenina » ny varotra fampisehoana mikasika ny kolontsaina Malagasy izay nahitana ihany koa ny tantaran’ireo Mpanjaka maro nifandimby teto Madagasikara sy fampisehoana an-tsary ireo lapan’ny Mpanjaka (rovan’i Manjakamiadana sy lapan’ireo Mpanjaka).
Ny Minisiteran’ny kolontsaina sy ny Asatanana no niara-niasa tamin’ny “ASPACIM” na (association pour la sauvegarde des patrimoines culturels immobiliers Malagasy, tanjona ho tratrarina mandritry ny hetsika moa ny mba hikajiana ny vakoka malagasy ary koa ny mba hampiroboroboana ny kolontsaina sy hanomezan-danja azy.
Hetahetan’Andriamatoa RABEMANOTRONA Lanto izay tompon’andraikitry ny hetsika ny hisian’ny mpanohana amin’ny lafiny rehetra ka hiitatra manerana ny nosy izao hetsika izao satria tokony ho fantatry ny Malagasy ny tantarany ary mbola maro ireo olona tsy mahalala izany, indrindra ireo tanora ankehitriny
Mamelomaso (05 Novambra 2015)
Notontosaina ny Alakamisy 05 Novambra 2015 tao amin’ny Ivo-toeran’ny kolontsaina Malagasy (IKM) Antsahavola ny velan-kevitra momban’ny « Tanora sy ny vakoka », izany dia tafiditra ao anatin’ny hetsika izay karakarain’ny fikambanana Mamelomaso ho fahatsiarovana ny faha 20 taona nahamay ny Rovan’Antananarivo. Ity famelabelaran-kevitra izay notarihin’Andriamatoa Razafimandimby Heritiana (Izy ilay Mahery) ity dia niresahana ny famaritana ny vakoka, ny anjara toeran’ny vakoka eo amin’ny fanabeazana ny tanora ary andraikitry ny tanora manoloana ireo vakoka.
Nisy koa horonan-tsary « vakoka sy tsidin-tany » izay nahampafantarana ny vohitr’Antanananarivo fahizay, ny Anaty Rova fahizay, ireo toerana manan-tantara teto Imerina, ireo sakafo sy fomba amam-panao Malagasy, sns
Ny tanjona tamin’ity hetsika ity moa dia ny mba hanomezana lanja ny vakoka Malagasy.
Mbola hitohy ny Zoma 06 Novambra 2015 eny amin’ny Rovan’Antananarivo sy eny amin’ny zaridainan’Andohalo ny hetsika.
Andro iraisam-pirenena ho an' ny haino aman-jery (27 Oktobra 2015)
Natao ny 27 oktobra 2015 tao amin’ny tranombokim-pirenena ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vakoka haino aman-jery. hetsitsika maro no natao mba ho fanamarihina ny fankalazàna toy ny fanentanana lehibe, ny« flashmob » nandraisan’ireo mpianatry ny lycée moderne Ampefiloha anjara, ny teatra nanehoan’ireo mpilalao sarimihetsika matianina ireo olana sedrain’izy ireo dia ny fanaovana osoka, ary famelabelaran-kevitra samy hafa narahina fikaonan-doha izay noresahahina indrindra ny tontolon’ny sarimihetsika.
Nandray anjara tamin’ny fanokafana ofisialy ity fankalazana ity ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta, ny Minisitry ny kolontsaina sy ny asatanana, ary solotena avy ao amin’ny OMACI (Office Malgache du Cinema)…
Anisan’ny nambaran-dramatoa Minisitra Brigitte Rasamoelina izay mpiahy ity hetsika ity nandritra ny lahateny izay nataony fa ny sarimihetsika dia zava-kanto tokony hampivoarina, ary koa tsy ho ela dia hisy fiofanana mahakasika ny « cinematographie » any amin’ny onoversite an’i Fianarantsoa.
Ny hetsika sahala amin’izao dia natao indrindra mba hanomezan-danja ny sarimihetsika Malagasy sy ny tontolony, ary ihany koa mba hananany ny anjara toerana tokony hisy azy eo amin’ny sehatry ny fampandrosoana sy ny ady amin’ny fahantrana eto amin’ny firenena
Andro iraisam-pirenena ho an' ny haino aman-jery (20 Oktobra 2015)
Ny 20 oktobra 2015 tao amin’ny tranombokim-pirenena Anosy no nanatontosaina ny valandresaka nifanaovan’ny mpanao gazety sy ireo mpanao sarimihetsika malagasy ho fankalazana ny « andro iraisam-pirenena ho an’ny vakoka haino aman-jery » izay atao ny 27 oktobra 2015 amin’ny 9 ora izay ho tontosaina eto amin’nyTranombokim-pirenena eto Anosy mandritra ny tontolo andro. Ka hetsika telo lehibe no ho hita mandritra io fotoana io : toin’ny fandefasana horonan-tsary mihetsika Malagasy maro samy hafa, ny famelabelaran-kevitra arahina fakaonan-doha mikasika ny lohahevitra maro samy hafa ary diabe hiombonan’ny tanora sy ny mpiantsehatra ao anatin’ny tontolon’ny sarimihetsika.
Ny tanjona dia ny amin’ny fanomezan-danja ny tontoloben’ny sarimihetsika sy ireo matihanina ary mpiantsehatra rehetra ahafahana mampitoetra ny fivondronana sy ny firaisankina mba ho tojo amin’ny vina hiombonan’ny rehetra , ahazoana vokatra azo tsapain-tanana.
Iray ihany ny Sinema Malagasy, Ary ny Vina dia tokana:”Ny Sinema Malagasy ho kitro hifaharan’ny Fampandrosoana”.
Kolontsaina Tanala (18 Septambra 2015)
Nisy ny hetsika ara-kolotoraly izay nokarakarain’ny foibe misahana ny kolontsaina eto anivon’ny Ministeran’ny Kolontsaina sy ny Asatanana tao amin’ny tranombokim-pirenena anosy (Efitrano Rado) ny Zoma 18 Septambra 2015. Hetsika izay miendrika famelabelaran-kevitra narahina fanontaniana niresahana ny kolontsaina Tanala izay notontosain’ i Jules ANDRIAMAHASITRAKARIVO mpianatra etsy amin’ny Anjerimanontolo Ankatso.
« Fikajiana ny harentsaina tananan’Ikongo » no lohahevitry ny Famelabelarana izay nisy fizarana telo, ny voalohany ny fahampahafantarana ny tatanan’Ikongo, ny faharoa ny fomba amam-panao ao Ikongo ary fahatelo ny tolon-kevitra ho fikajiana ny kolontsaina.
Ny tanjona tamin’ity hetsika ity dia ny fahampahafatarana ny kolontsaina Tanala ary fanentanana ny Malagasy mba hitandro ny kolontsaina malagasy izay tandindonin-doza nohon’ny fantongavan’ny riba vahiny.
Valandresaka ho an' ny mpanao gazety (20 Aogositra 2015)
Nisy ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety tao amin’ny tranombokim-pirenena Anosy (efitrano Rado) ny Alakamisy 20 Aogositra 2015 izay nanambaràna tamin’ny fomba ôfisialy ny fanatanterahana ny”Festival LAMPOGNO” andiany faha 8.
Ny “Festival LAMPOGNO" dia hotanterahana ny 27 Aogositra ka hatramin’ny 30 Aogositra 2015 any Antsohihy renivohitry Sofia. Natao io hetsika io nohon’ny fahatsapàna ny fananantsika harena ara- kolontsaina sy ara-javakanto maro nefa tsy voatrandraka vokatry ny tsy fahampian’ny sehatra entina mamoaka sy mamolavola mpanatalenta tehamoaka ny talenta hananany, eo koa ny fitiavana tehanandratra avo ny maha Malagasy ao anatin’ny fomba nentim-paharazana…
Ny tanjona tratrarina amin’ity hetsika ity dia ny fanandratana sy fampandrosoana ny lafiny ara-kolotsaina indrindra ny nentim-paharazana, ny firaisan-kina na fifanomezan-tanana amin’ny zavatra rehetra atao mba ho fampandrosoana an’I Madagasikara, ny fitondrana anjara biriky amin’ny fiarovana ny tontolo iainana, ny hampisy sy hahamora ny “échange culturelle”.
Ny vokatra andrasana mandritry ity “Festival LAMPOGNO” andiany faha 8 ity dia ny fampivoarana ny faritra amin’ny lafiny: Ara-kolotsaina, ara-toekarena, ara-tsosialy mba hampisongadinana ny kolotsaina. Sy ny fanomezana fialamboly ho an’ny vahoaka.
Ireto avy ireo zavatra ho hita mandritra io « festival LAMPAGNO » andihany faha 8 io:
“Carnaval” makotrokotroka ho fanokafana ny lanonanana anehoana ny kolontsaina tsimihety sy avy amin’ny faritra hafa ;
Fampisehoana ny fomba fangalam-baivavy tsimihety sy ny valizy mena ou (le mariage Tsimihety) :
Seho sy fifaninanana vakodrazana tsimihety izay karazana ôsiky (hira) jiaby, dihy,zava-maneno nentim-paharazana, fitafy sy taly tsimihety ;
Trano eva maro isan-karazany anehoana ny kolontsaina, asatanana, ny vokatry sy sakafo tsimihety
Fampisehoana rakitsary mitantara ny nahatonga ny dihy « Baoejy »iza y nivoaka tao amin’ny faritra ;
Fampisehoana rakitsary momba ny fikajiana sy fiarovana ny tontolo iainana ;
-Grand Maître Tianjama
Fampisehoana iarahana amin’ny mpanakanto malaza avy amin’ny lafy valon’ny nosy toy ny tarika:
-Zandry Ahmed sy Willy sy Zay One
-Stéphanie sy Jazz MMC et Ida
-Jangara sy Big MJ sy Tsatsa
Ireo ray aman-dreny mpanohana ity Festival ity dia :
Minisiteran’ny Kolontsaina sy ny Asatanana sady mpiahy ity “festival” ity.
Mininiteran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana
Ny lehiben’ny Faritra Sofia,
Ny Firaisana Antsohiy
Ny Radiosy Televiiona Malagasy
Ny mpanohana ity hetsika ity dia ny orin’asa “STAR”, ny mpiara miasa kosa dia ny Orange Madagascar/JR Pro
Ireo zavatra nisongadina sy ireo dingana nandalovana:
Mampatsiahy sy manamafy ary manome lanja hatrany ny kolontsaina Malagasy;
Ambohi-pihaonan’ny vahoakan’ny Sofia ny festival Lampogno;
Mandeha ny seha-pihariana rehetra mandritra ny lampagno;
Mandeha ny seha-pihariana rehetra mandritra ny lampogno: taxi-brousse, hotely, mpivarotra, ny mpiala sasatra sns … (taux de remplissage 100%);
Nizaka ny vokatry ny krizy pôlitika ny festival lampogno(nefa mitraka ny festival hatramin’izao)Sary
IKM (17 Aogositra 2015)
Notanterahina tao amin’ny Ivotoeran’ny Kolontsaina Malagasy (IKM) Antsahavola ny 17 Aogositra 2015 ny tohin’ny hetsika ara-kolotoraly nokarakarain’ny Foibe misahana ny kolontsaina izay nampitondraina ny lohahevitra hoe : « kolontsaina fototry ny fampandrosoana». Famelabelaran-kevitra notanterahin’ ireo solontena avy amin’ny Tafo Miha Avo anisany nibahana tao ny lohahevitra hoe« Fokonolona miraharaha, Faritra ivelomana, Fampivoarana lovainjafy » Ary tebokatelo no novelabelarina nandritra izany dia ny faritra ifampivelomana, ny fiaraha-mivelona ary farany ny fandria-mpahalemana rehefa vita izany dia narahina adihevitra.
Nomarihina tao koa fa ny tenintsika, ny tanintsika (Madagasikara), ny rano, ny vary, ny omby ary ny fifampitondrana tena Malagasy no kolontsaina mampitambatra antsika.
Maro ireo andraikitry Minisiteran’ny Kolontsaina sy ny Asatanana manoloana izany « kolontsaina fototry ny fampandrosoana» izany ohatra amin’izany ny:
- Manamafy ny firaisankinam-pirenena
- Mikaly ny harem-pirenena
- Mampiroborobony kolontsaina Malagasy
- Manome lanja ny asatanana sy ny asa mifandraika amin’ny kolontsaina
- Manampy amin’ny fampiroboroboana ny orinasam-pamokarana mifandraika amin’ny kolontsaina.
Fampirantiana momba ny Kolontsaina Malagasy (12 Aogositra 2015)
Notanterahina tao amin’ny tranombokim-pirenena Anosy ny 11 Aogositra 2015 ny lanonam-panokafana miendrika fampirantiana momban’ny kolontsaina. ”NY KOLONTSAINA NO MAHA MALAGASY ANTSIKA”, izany no lohahevitra nentina tamin’izany.
Anisan’ny fanontaniana napetraka ny hoe:
Inona ny maha Malagasy: ny maha isika antsika?
Ny ahafantarana antsika hoe Malagasy dia ny kolontsaina anananantsika.
Inona no atao hoe “kolontsaina"?
“Ny kolontsaina dia ny fitambaran’ireo toetra mampihavaka ny vondron’olona eo anivon’ny fiarahamonina amin’ny lafiny: ara-panahy sy ara-tsaina ary ara-pihetseham-po. Ao anatin’zany ny zavakanto sy haisoratra, ny fomba fiaina, ny zo fototry ny olombelona, ny soatoavina sy ny fomba nentim-paharazana ary ny finoana”.
Indro ny lahateny naroson’Andriamato Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Kolontsaina sy Asatanana nandritra io lanonam-panokafana io:
Ny kolontsaina no maha MALAGASY antsika
Ny kolontsaina no fototry ny fampandrosoana
Ny voalohan-teniko dia miarahaba anareo rehetra nasaina tonga manatrika ity andro fanomezan-danja ny KOLOTSAINA MALAGASY ity.
Miarahaba tompokolahy miarahaba tompokovavy
Ny fandrahon-kena hono samy manana, fa ny vilanin-dronono sarotra ihamboana.
Ny Kolotsaina samy manana ny azy maneran-tany.
Fa ny an’ny MALAGASY sady tsara no mendrika tsy misy toa azy.
Satria toy ny hazo, maro ny sampany, maro ny rantsany, nefa ny fotony iray ihany.
Isika tia fandrosoana sy tia tanindrazana no hiaraka hikolokolo sy hampitombo ny hazo ka hahatonga azy ho fanoitry ny fihariana ho an’ny MALAGASY tsirairay hoy ny oha-pitenenana
« Ny hazo tokana tsy mba ala »
Inona ary no mampihavaka anao amin’ny hafa ?
Ny teny sy ny fomba amam-panao !
Tsy maintsy miara-manaiky isika fa ireo no kolontsaina iombonana nefa koa ihavahantsika amin’ny hafa, ka ilazana fa MALAGASY IANAO.
Miainga amin’ny fitaizana ao an-tokantranon’ny Ray aman-dreny, mibahan-toerana tamin’izany ny fifanajana amin’ny lafiny rehetra. Nandalo ny fiainan’ny fianankaviana nanovozona ny fihavanana,ary mipaka tao amin’ny faiaraha-monina izay nanasongadina ny Firaisan-kina.
Harindra ireo rehetra ireo mba hiteraka angovo hampiroboroboana ny fiharian-karena an-drenivohitra na ambanivohitra. Ifotorana araka izany ireo fomba amam-panao mitondra ho amin’ny fampandrosoana hanatsarana sy hampitomboana ny vokatra eo amin’ny asa atao ;toy ny :
-Asa vadi-drano tsy vita tsy ifanampiana
-Asa tana maro sy ny sisa
Misy koa anefa ireo fomba amam-panao sy fombam-pitenenana efa tokony ilaozana satria tsy mifanaraka amin’ny vanim-potoana ankehitriny intsony, sady sakana ho amin’ny fampandrosoana ohatra:
-Ny indro kelin’ny mpandrafitra
-tsy hitan’izay tsy nanao azy
-Ny fotoan-gasy sy ny sisa……….
Isika koa anefa tsy afaka ny tsy hisokatra amin’ny any ivelany, ary tsy maintsy maharaka ny fivoaran’ny teknolojia izay mihazakazaka tokoa.
Satria tokony ho fantantsika Malagasy fa mitaky kalitao ny asa-tanana, noho izany tsy ekena intsony ny kitoatoa, toy izany koa ny asa aman-draharaha isan-tsokajiny.
Mitaky « toe-tsaina » afaka mandanjalanja sady sahy mitondra fanovana hanatsarana ny asa na eo amin’ny fambolena na fiompiana izany.
Tsy ho tonga amin’izany anefa isika raha tsy :
-Saina miara mandinika,
-Soroka miara milanja
Ny adidy raha teo tsy an’olon-dratsy,
Ny ratsy koa tsy kely làlana
Ny fihatsaran’ny fiharin-karenan’ny fianankaviana Malagasy tsirairay dia azo handrefesana ny fandrosoan’ny firenena :miasa ny vahoaka, betsaka ny vokatra, milamina ny tany.
Ilaina araka izany ny Malagasy mandàla ny Kolontsainy ka manindraindra azy ireny, tsara kokoa anefa raha manana fahaizana sy fahalalana ampy mba hahafahany mitondra zava-baovao indray ka ilazana fa fanoitry ny fampandrosoana ny kolontsaina.
Manentana antsika aho araka izany:
-Tsy hanao randrana tsy manendrika ny tena,
-Na koa « Nahita akanga tsara soratra ka hanary ny akoho taman-trano »
-Na koa varivarin’ny lavitra ka tsy mahita ny ambinin’ny maso.
Eto am-pamaranana dia tsy haiko ny tsy hisaotra an’ireo rehetra izay nitoto nahafotsy sy nahandro nahamasaka izao hetsika izao, tolorako fisaorana manokana ny tambazotran’ny fokonolona mitantana ny Harena Voajanahary na ny TAFO MIHAAVO tamin’ny firaha-miasa.
Andeha ary hasandratra ny Maha Malagasy antsika ka hanome lanja ny toeran’ny Kolontsaina ifanindran-dàlana amin’ny fampandrosoana ny firenena dia ho Sambatra i Madagasikara.
Hitombo hasina anie ny Kolontsaina Malagasy!
Mankasitraka Tompokovavy »
Tsy hifarana ny hetsika raha tsy ny 21 Aogositra 2015 izay hanentanana ny rehetra hitsidika izany ao amin’ny hefitrano Gisèle Rabesahala.
FIER-mada andiany faha 17 (05 Aogositra 2015)
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy tetsy Mahamasina ny Alarobia 05 Aogositra 2015 ny FIER-mada na « tsenabe iraisam-pirenena hoan’ny toe-karena eny ambanivohitra », izany dia natao teo ambany fiahian’Andriamatoa filohampirenena Hery RAJAONARIMAMPIANINA sy ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta Jean RAVELONARIVO izay nosoloin’ny Minisitry ny fiarovam-pirenena RAKOTOZAFY Dominique tena.Hetsika fanao isan-taona ny FIER-mada ka ny andiany faha 17 ity tanterahana ity, ary anisan’ny mampiavaka azy ny fitombon’ireo mpandray anjara satria nahatratra 330 isa ireo tranoheva izay nahitana karazan-entana isan-karazany avy amin’ireo faritra 22 manerana ny Nosy, tao ohatra ny : zana-bonikazo, ny sakafo, ny asa tanana sns.
Yoga (03 Aogositra 2015)
Tohin’ny fankalazàna ny andro iraisam-pirenena hoan’ny Yoga ny 21 Jona 2015 lasa teo tany amin’ny Hotel Ibis Ankorondrano sy nohon’ny fangatahan-dRamatoa Minisitry ny Kolontsaina sy ny Asatanana dia nisy fotoana nanaovana Yoga izay natolotry ny Masoivohon’ny Inde nohon’ny fiaraha miasa amin’ny HOLISTIC HEALING CENTER. Ny Alatsinainy 3 Aogositra 2015 no nanatanterahana izany tao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy (efitrano Gisele Rabesahala). Nandritra izany dia nisy famelabelaran-kevitra fohy mahakasika ny yoga ary fampisehoana ny fomba fanaovana Yoga izay nandraisan’ny mpiasan’ny ministera anjara.
Fanolorana Rakibolana (28 Jolay 2015)
Ny Talata 28 Jolay 2015 tao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy no notontosaina ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ny fanontana fanintelony ny rakibolana Indonezianina-Malagasy. Izany no natao, nohon’ny fiaraha miasa misy miaraka amin’ny Ministeran’ny Kolontsaina sy ny Asatanana. Ny mampiavaka ity fanontana ity dia fampiarahana ny famoahana ny rakibolana amin’ny fankalazana ny faha 40 taonan’ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin’ny Indonezia sy Madagasikara.
Nandritra izany dia nisy ny seho ara-kolotoraly samihafa mba hanehoana ny mahakanto ny kolontsaina Malagasy sy Indonezia.
Natao ity fotoana ity mba ahafahan’ny firenena roa tonta mianatra sy mamantatra ny tantarany, izay araka ny fikarohana nifanesy dia efa nisy nandritra ny arivo taona mihoatra lasa.
Fanomezana (16 Jolay 2015)
Notanterahina tao amin’ny Tranombokim-pirenena ny 16 Jolay 2015 ny fanomezana kojakoja ara-panatanjahantena avy amin’ny Ministeran’ny Kolontsaina sy ny Asatanana ho an’ny ekipa nasionaly eo amin’ny taranja ady totohondry izay handray anjara amin’ny LALAON’NY NOSY any La Réunion ny 01 ka hatramin’ny 09 aogositra 2015.Marihina fa ny Ministeran’ny Kolontsaina sy ny Asatanana no mpiahy io taranja io. Ny Ministra moa dia nirary soa sy fahombiazana ho an’ny mpandray anjara tsirairay.
SAHOBIN’I FIDASIANA 2015
Toy ny fanao isan-taona, ho fankalazana ny faha 26 Jona, ny OSCAR na ny Ofisy mitantana ny Vohitr’Ambohimanga Rova, rantsamangaikan’ ny Ministeran’ ny Kolontsaina sy ny Asatanana dia nikarakara hetsika izay nomena ny anarana “SAHOBIN’I FIDASIANA” ny Alakamisy 25 Jona tetsy amin’ ny Kianjan’ ny Fidasiana Ambohimanga.
“Sahobin’i Fidasiana” no nanaovana ny hetsika noho ireto antony ireto:
Tamin’ny andron’ny Andriamanjaka, 500 taona lasa izay, dia teo no toerana nihaonan’ny Andriamanjaka tamin’ny vahoakany
teo ihany koa no toerana fanaovana lanonana ara-kolontsaina samihafa tamin’izany fotoana izany toy ny “Fandroana malagasy” izay fotoana lehibe iray hifamelana raha toa ka nisy ny disadisa, sady hanombohana fiainana vaovao indray amin’ny alalan’ny fitsofan-dranon’ ny Andriamanjaka ny vahoaka raha : - “hamboly hahavokatra” - “hiompy hahavanona” - “ho feno fahasalamana lavitrin’ny aretina” - “hivitrana ny fihavanana”, sns
Tsara ampahatsiahivina fa ny hetsika dia:
Tafiditra indrindra ao anatin’ny fankalazana ny iray volan’ny ankizy,
Fankalazana ny niverenan’ny fahaleovan-tenan’I Madagasikara, no sady fandaharan’asan’ny OSCAR amin’ny fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana ara-tsosialy ny eto an-toerana, dia ny ato amin’ny Kaominina Ambanivohitra Ambohimanga Rova izany.
Arak’izany, tokana ny tanjona, dia ny fanehoana ny firaisankina sy ny fanamafisana ny fihavanana eo amin’izay zavatra rehetra hatao.
Fanokafana ofisialy ny fampirantiana sary "Panorama de Madagascar, La belle grande île" (24 Jona 2015)
Alarobia 24 jona 2015 no fotoam-panokafana ny fampirantiana sary notontosain’ny Ambasadaoron’i Sina tao amin’ny efitrano Rado. Miisa 100 ireo sary nampirantiana izay nontsogainy tamin’ireo sary aman’arivony ary marihina fa izy ihany no naka ireo. Tonga nanome voninahitra io fotoam-panokafana io Ramatoa Brigitte Rasamoelina, Ministry ny Kolontsaina sy ny Asatanana notronin’ireo mpiara-miasa aminy sy ireo vahiny manan-kaja teratany Sinoa.
Haharitra telo andro io fampirantiana io ary natao ho an’ny Malagasy sy ireo mpizahan-tany ka tanjona ny hanehoana an-tsary ny hakanton’I Madagasikara.
Fanokafana ofisialy ny fampirantiana ny Tantaran' i Madagasikara (22 Jona 2015)
Notontosaina ny Alatsinainy 22 Jona 2015 tao amin’ny Lapan’ny Tanana Analakely ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny fampiratiana sary tantaran’i Madagasikara ka haharitra 3 andro izany. Hetsika izay ao anatin’ny fankalazàna ny fahaleovantenan’i Madagasikara ary koa mifanindry amin’ny fetin’ny foloalindahy. “Fitiavan-tanindrazana sy fihavanana: Antoky ny fampandrosoana” izany no lohahevitra nentina nanamarika io fotoana io. Sary maro izay manamarika ny lalana nodiavin’I Madagasikara nandritry 55 taona nahazoany fahaleovantena, miampy ny tantaran’ireo mpitondra fanjakana nifanesy, ireo no miranty eo antokotanin’ny lapan’ny Tanàna ka azon’ny rehetra tsidihana izany.
Ny Ministeran’ny Kolontsaina sy ny Asatanana, ny ministeran’ny Foloalindahy ary ny ministeran’ny serasera no niara nientana tamin’ny fikarakarana ity hetsika ity.
Ny tanjona moa dia ny mba ahafantaran’ny rehetra ny tantaran’i Madagasikara.
Fifaninanana Vakiteny (19 Jona 2015)
Santionan’ny sary Fifaninanana vakiteny izay nataon'ny foibe misahana ny kolontsaina ny 05, 12,19 jona 2015 ho fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy tany amin’ny Lycée Akamasoa Andralanitra.
Fanaovan-tsonia fifanarahana (18 Jona 2015)
Nisy ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana tao amin’ny tranombokim-pirenena (efitrano Rado) ny 18 jona 2015 nifanaovan-dRamatoa Brigitte Rasamoelina Ministry ny Kolontsaina sy ny Asatanana sy Andriamatoa Mohamed Djelid Tale Rejionaly ny UNESCO ho an’ny Afrika atsinanana, ary natrehan’ny Masoivoho ny Japana Ryuhei Hosoy. «Fananganana trano fikojana ny vakoka ao amin’ny Rova Manjakamiadana » no vinan’asa, natao mba hanarenana ny vakoka sisa tavela tao amin’ny Rova. Japana no nanampy ara-bola io atrik ‘asa io ka nanolotra 1 488 068 000 Ariary izy ahafahana manangana trano fikojana roa, fanisana sy fanavaozana ireo vakoka manan-tantara tao amin’ny Rova Manjakamiadana. Ny ampaham-bola 819 167 510 ariary izay tantanin’ny UNESCO dia afaka ampiasaina hanomboana ny asa.
Ramatoa Ministra dia nanindry fa ny Rova Manjakamiadana dia isan’ireo 168 manantatara eo amin’ny vakoka nationaly ary ireo fitaovana voatahiry ao dia anisan’ny manan-danja tokoa eto amin’ny tantaran’ny Madagasikara.
Kilonga mandala ny soatoavina Malagasy (17 Jona 2015)
Noho ny fankalazana ny iray volan’ny ankizy dia nisy hetsika ara-kolotoralynokarakarain’ny sampandraharaha misahana fanabeazana ho olom-pirenena Foiben’ny kolontsaina ; tao amin’ny hefitrano Rado ao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy ny Alarobia 17 jona 2015.
« Kilonga mandala ny soatoavina Malagasy »izany no lohahevitra nentina nanamarika io fotoana io. Ny mpianatra ao amin’ny EPP Isotry Ampefiloha sy Ecole Capucine 67ha Avaratra Andrefana no nandray anjara nandritra izany.
Ny tanjona tamin’ity hetsika ity dia ny Fameloma-maso sy fampitana ny kolontsaina sy ny soatoavina malagasy, famohazana ny sain’ny ankizy mba hahafantatra ireo fahaiza-miaina sy fahalalam-pomba mifanaraka amin’nizany kolontsaina malagasy ary mba hananana ankizy mahalala fomba eo anivon’ny fiaraha-monina sy ny firenena.
Fanentanana ho an' ny Mpanao Asatanana (17 Jona 2015)
Nisy ny famelabelaran-kevitra notanterahin’ny foibe misahana ny kolontsaina tao amin’ny Tranombokim-pirenena (efitrano Rado) ny Alarobia 17 Jona 2015 izay natrehan’ny solontenan’ny Minisiteran’ny Kolontsaina sy ny Asa tanana notronon’ny Sekretera Jeneralin’ny Minisitera, ny Tale Jeneralin’ny kolontsaina, ny Talen’ny fampiroboroboana ny asa tanana ary ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny momba ny asa tanana manerana an’i madagasikara.
Famelabelarana izay natokana hoan’ny mpanao asatanana ary niresahana ny lanjan’ny kolontsaina sy ireo harem-bakoka isan-karazany ananan-tsika Malagasy. Ady hevitra, fisidihina fampiratiana, fanentanana hoan’ny mpanao asatanana mba hanao famoronana mivohy sy maneho ny kolontsaina Malagasy… ireo no nandrafitra ity fotoana ity.
Vaha-kanto faha III (10 Jona 2015)
Natao ny Alarobia 10 Jona 2015 lasa teo tao amin’ny efitrano Gisèle Rabesahala ny fanokafana ny hetsika «Vahan-kanto faha III » izay nokarakarain’ny dian-tanamasoandro. Ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Kolontsaina sy ny Asatanana, izay solontenan’ny Minisitra no nanokatra izany hetsika izany. Miendrika fampirantiana fafana misy tononkalo, sary hosodoko, boky… ny hetsika. Ary mbola mitohy ny Alakamisy 11, Zoma 12, ary ny Sabotsy 13 Jona 2015.
Andro eran-tany ho an’ny ASATANANA (10 Jona 2015)
Varotra fampirantiana asa tanana, fampisehoana fahaiza-mandrary lamba landy, ireo no notanterahana ny Alarobia 10 jona 2015 nandritry ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny andro maneran-tany hoan’ny asatanana izay nosokafan’ny Minisitry ny Kolontsaina sy ny Asatanana Brigitte Rasamoelina teny amin’ny zaridainan’Andohalo.
Mba ahafahana manampy ny mpanao asatanana Malagasy dia ilaina ny fampiharana ny “code de l’Artisanat” sy hanisana ny tena isan’izy ireo manerana an’I Madagascar, ary koa hisy fizarana karatra hoan’ny mpanao asatanana rehetra, izany dia ho vitaina ao anatin’ny 3 na 4 volana hoy ihany ny Minisitra nanohy ny teniny.
Fanolorana Sary vongan' i Gisèle Rabesahala (10 Jona 2015)
Natolotra ny Alarobia 10 jona 2015 tao amin’ny efitrano Gisele Rabesahala ao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy ny sary vongan’I Ramatoa Gisele Rabesahala, ilay andrarezin’ny kolontsaina nandalo teto amin’ny Ministera izay namboarin’ny mpanao sarisikotra Ndrina Rajaonimanana.
Nanatrika io fotoana io ny minisitry ny kolontsaina sy ny asatanana Brigitte Rasamoelina, ny fianakavian-d Ramatoa Gisele Rabesahala ary ireo tale isan-tsokajiny eto anivon’ny Ministera.
Ny ministry ny Kolontsaina sy ny Asatanana dia nilazalaza ny mombamomba an’I Gisele Rabesahala nandritra ny anjara fitenenana izay nataony.
Minisitry ny kolontsaina nanomboka ny taona 1977 ka hatramin’ny 1991 izy ary nanome toerana goavana ny artiste Malagasy.
izy no nanokatra ny bibliothèque national 27 janoary 1987, nanamboatra ny trano kolotoraly ao Mahajanga 1987, nanangana trano kolotoraly tany Toliary, ary nanagana ny trano fianarana mozika CNEM izay lasa CNEMD taty aoriana.
Izy ihany koa no loharano nipoirana sy vy nahitana ireo tranom-bakoka sy toerana manantantara maro misy manerana an’I Madagasikara , tao ohatra ny fanatsarana ny rovan’I Manjakamiadana, rovan’Ambohimanga.
Velakevitra “Ny toeram-ponenana sy ny rano”
Ny harivan’ny 08 Jona kosa dia nisy velakevitra nitondra ny lohahevitra : “ny toeram-ponenana sy ny rano” natao tao amin’ny Tahala rarihasina ihany ka Ramatoa Rakotoson lala Agnes, mpampianatra teny Malagasy no nanao izany. Nizara efatra ny velakevitra dia ny famaritana , ny hasarobidin’ny rano, ireo loza mety hateraky ny rano, ary ny zavatra tokony hataon’ny olona hikojana ny rano.
Ny velakevitra dia hitohy ny 09, 10,11, ary ny 12 Jona 2015 ka hisy lohahevitra samy hafa ho velabelarin’ireo manam-pâhaizana momba ny teny Malagasy mandritra izany.
Fanokafana ny fankalazana ny iray volan’ny Teny Malagasy
« Tsy resy ny teny Malagasy » izany no teny nataon’ny Minisitry ny Kolontsaina sy ny Asatanana Ramatoa Brigitte RASAMOELINA raha nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny fankalazana ny iray volan’ny teny Malagasy izy sy ireo tao amin’ny Tahala Rarihasina Analakely ny 08 jona 2015. Fankalazana nokarakarain’ny: FMTS, SYNAEL,TANTSARY, izay samy tafiditra ao amin’ny fikirakirana ny teny Malagasy.
Nampirisika ireo mpikarakara ny hetsika ny Minisitra mba hanentana hatrany ny olona hampiasa ny Teny Malagasy, ary nolazainy moa fa ny fivorian’ny governemanta dia atao amin’ny teny Malagasy rah a ny taratasy hiasana sisa no amin‘ny teny Frantsay.
Tsy resy tokoa ny teny Malagasy, satria mbola misy olona mpanentana sy mikarakara hetsika hanomezan-danja azy eto Madagasikara.
Hiragasy (05 Jona 2015)
Nisy fampisehoana hiragasy ankalamanjana nataon’ny tarika RAZAKASON Fenoarivo teo amin’ny Tahala Rarihasina ny Zoma 05 Jona 2015, hetsika izay tafiditra ao antin’ny fankalazana ny iray volan’ny teny Malagasy 2015. “RANO SY NY TOERAM-PONENANA” io no lohahevitra nihompanan’ny mpikarakara izay nahitana ny fandraisan’anjaran’ny WATER AID, nanentana ny tsirairay hampiasa rano madio ka hitandrina ny fahadiovana eo amin’ny toeram-ponenana.
Valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety Tahala Rarihasina Analakely (29 May 2015)
Mandritra ny volana jona ary isan-taona no hankalazana ny iray volana hanandratana ny teny Malagasy. Nampiantso mpanao gazety ny mpikarakara io fankalazana io izay nahitana ny : AKADEMIA MALAGASY , ny ONIVERSITE ANTANANARIVO, ary ny TAHALA RARIHASINA, miara-miasa amin’ ny Wateraid, sy ny Ministeran’ny Kolontsaina sy ny Asa Tanana.
“Teny Malagasy, loharano tovozin-tsy ritra, antoky ny toeram-ponenana soa sy madio” no lohahevitra mandritra ny fankalazana, anisan’ny tanjona mantsy ny hanandratana ny teny Malagasy sy hanomezana lanja izany araka ny voalazan’Andriamatoa RAHAINGOSOA Henry, mpikambana ao amin’ny Akademia Malagasy Tsimbazaza ilay fehezan-teny efa be mpahalala manao hoe: “Andrianiko ny teniko, ny an’ny hafa koa feheziko”.
Mandritra ny volana Jona 2015 dia maro ireo hetsika fanentananana sy fankalazana, ka ho sokafana amin’ny fotoampivavahana ao amin’ny FJKM Katedraly Analakely ny 01 JONA 2015 izany, amin’io ihany koa no hankalazana ny faha 180 taona nanoratana ny Baiboly amin’ny teny Malagasy sy ireo rakibolana Malagasy voalohany notontosain’I Freeman sy I johns.
Sekoly fito kosa no hanatanterahan’ny Ministeran’ny kolontaina sy ny Asatanana fifaninana vakiteny ka hisy fizarana ohabolana sy mari-pankasitrahana hoan’izay mendrika amin’izany.
Manaraka izany, hisy loa-bary an-dasy sy velankevitra mandritra ny volana jona.Ny 04 jONA dia eny amin’ny Akademia Malagasy tsimbazaza, ny 08 ka hatramin’ny 12 Jona 2015 fampiratiana “teny, rano, trano fonenana ao amin’ny Tahala rarihasina.
Ary ny “hetsika fara-doboka” dia hotontosaina ny 01 volana Jolay 2015 hahitana: seho an-tsehatra, hainteny, kabary, angano izay handraisan’ny Federasionan’ny Mpikanto teny sy soratra (FMTS, LLOM, ENS).
Ireo tanjona mandritra ny fankalazana:
- fitondrana voka-pikarohana sy fampahalalana ny bainga voavadika hibanjinana ny ho avy
- fanangonana fiteny sy fisainana samihafa mandrafitra ny Firenena
- fanolorana hafatra hoan’ny tontolon’ny fanabeazana
- fivoizana ny fijery vaovao sady mahasoa ifanabeazana
Farany, nomarihana fa ny fanandratana ny Teny Malagasy dia mifamatotra amin’ny fankalazana ny fahaleovan-tena amin’ity volana Jona ity ka entanina ny rehetra samy hahatsapa ny maha sarobidy ny teny Malagasy ka hampiasa azy avokoa.
Andro eran-tany ho an'ny Asatanana (28-29-30 May 2015)
Ho fanombohana ny fankalazana ny JMA na andro maneran-tany momba ny asa tanana 2015 dia nanao varotra fampisehoana ny minisiteran’ny kolontsaina sy ny asa tanana ny 28, 29, ary ny 30 May 2015 teo amin’ny « Esplanade Antaninarenina » no nanatontosana izany.
Tranoheva efatra no hita tao ary nandraisan’ireo fikambanana sy orinasa vitsivitsy anjara, tao ohatra ny :
- Association OREV Madagascar nampiranty sy nivarotra ravaka isan-karazany
- Koperativa TALENTA izay fikambanan’ireo manana kilema ara-batana nefa manao asa Tanana
- Association JEUDI DES FEMMES ENTREPRENEURS nivarotra harona, sac en crochet sns
- Airtel Madagascar nanampy teo amin’ny fanamafisam-peo sy fampitaovana tamin’ny fanentanana rehetra
Nankalazaina tamin’io ihany koa ny fetin’ny reny ka dia nisy ny fanomezana sahaza hoan’ny reny tamin’ireo asa Tanana nampirantiana teny an-toerana.
Tanjona tamin’io varotra fampiratiana io moa ny ahafahana manampy ireo mpikambana ao amin’ny KOPERATIVA TALENTA amin’ny asa Tanana ataony na dia eo aza ny kilema ara-batana.
Andro eran-tany ho an' ny kolontsaina marolafy (20 May 2015)
Ny Kolontsaina marolafy dia ny fomba anehoan’ireo vondron’olona sy ny fiarahamonina ny kolontsain’izy ireo. Izany fomba izany dia miampita eo amin’ny isam-batan’olona sy eo anivon’ny fiarahamonina manontolo. Ny Alarobia 20 Mey 2015 no nanatanterahana ny fankalazàna ny andro eran-tany ho an’ny kolontsaina marolafy. Tao amin’ny efitrano Gisèle Rabesahala ao amin’ny Tranombokim-pirenena no nanantanterahana azy ity.
« Ny dihy sy mozika nentim-paharazana andalam-pahaverezana » izany no lohahevitra nentina nanamarika ity fotoana ity.
Miisa 31 ny dihy manerana ny faritra 17 eto Madagasikara atahorana ny ahalany tamingana ireo. Anisany paik ‘adin’ny Ministera ny hiarovana ny kolontsaina marolafy. natao tamin’ny endrika fampiratiana sary sationan’ny dihy ; boky ary DVD ity hetsika ity.
Andro iraisam-pirenena ho an’ny Mozea (18 May 2015)
Ny Alatsinainy 18 May 2015 no nankalazaina ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Mozea. Notanterahina tany amin’ny Mozea an’Andafiavaratra izany ary notarihin-dRamatoa Ministry ny kolontsaina sy ny Asatanana. Andafiavaratra no toerana nosafidiana hanatanterahana azy ity noho izy toerana manan-tanatara.
Efa 27 taona izay no nankalazana ity andro iraisam-pirenena ho an’ny Mozea ity ary 25 no isan’ny Mozea maneranan’ i Madagasikara izay samy mandray anjara amin’ny fampahafantarana ny fiarahamonina ny tantara sy ny mampiavaka an’i Madagasikara amin’ny alalan’ny fampiratiana maro samy hafa.
“Mozea antoky ny fiarahamonina maharitra” izany no lohahevitra nentina nankalazàna ity fotoana ity.
Nambaran-dRamatoa Ministry ny Kolontsaina sy ny Asatanana Brigitte Rasamoelina nandritry ny lahateny izay nataony fa ny Mozea dia rafitra maharitra iray, tsy natao hahazoam-bola, fa miasa ho amin’ny fiarahamonina sy ny fampandroasoana azy. Managona vaovao sy mampahafantatra ihany koa hoy izy ny Mozea mba ho fianarana sy fanabeazana ary fahazoana fahafinaretana. Nanteriny koa fa Zava-dehibe hoan’ny Ministeran’ny Kolontsaina sy ny Asatanana ny fisian’ny Mozea 25 eto Madagasikara satria anatin’ireny Mozea ireny no anehoana fa manana kolontsaina marolafy sy kolontsaina miray tendro isika Malagasy”. Notoizana tamin’ny fitsidihina ireo vakoka manantantara moa izany Hetsika izany.
Marihina fa anisan’ny toerana nanaovana ity fanakalazàna ity ihany koa ny tao amin’ny Tahala Rarihasina Analakely.
Fitsidihina Ambasadaoron' i Sina (15 May 2015)
Nisy ny fihaonana nataon’ny "Ministry ny kolontsaina sy ny Asatanana" sy ny "Masoivohon’ny Sina" ny Zoma 15 May 2015. Noresahina nandritra izany ny fiaraha-miasa momban’ny hetsika ara kolotoraly miendrika fampirantiana izay ho karakarain’ny roa tonta. Ny 29 sy ny 30 jona 2015 no hanatanterahana io hetsika io. Sary momban’ny tantaran’ny Madagasikara no hita ao. Nijery ireo efitrano lehibe misy eto anivon’ny Tranombokim-pirenena izy ireo mba hisafidianana ny toerana hanatanterahana izany .
Asoimi (08 May 2015)
Ny 08 May 2015 no fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny ASOIMI (Association Omnisports InterMinistériels et Institutions), natao tao amin’ny Lapan’ny Kolontsaina sy Fanantajahan-tena Mahamasina. Anisany nanatitraka izany ny Minisitry ny Kolontsaina sy ny Asatanana sy ny mpiaramiasa aminy sasantsasany, ny Mpanolo-tsainan’ ny Filoham-pirenena, ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanantanjahan-tena izay Filoham-boninahitry ny ASOIMI.
Manakara no toerana hanantanterahina ny fifaninanana nationaly ny 24 Septambra ka hatramin’ny 04 Oktobra 2015.
Andro iraisam-pirenena ho an’ny Jazz ( 30 Aprily 2015)
Nandritry ny fivoriam-ben’ny UNESCO tamin’ny volana novambra 2011 dia tapaka fa isaky ny 30 Aprily no hankalazaina ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny Jazz. Anisan’ny nankalaza izany isika teto Madagasikara tamin’ny alalan’ny Ministeran’ny Kolontsaina sy ny Asatanana, ny “Office Régional du Tourisme d'Analamanga” ary ny “Festival Madajazzcar”. Hetsika izay notontosaina teo amin’ny zaridainan’Antaninarenina, ka nahitana fandraisan’anjaran’ireo tarika mpiangaly Jazz fanta-daza toa an’dry: Jazz Quart, Melojazz, Three Play (nahazo ny “tremplin Jazz” 2012), Koon-tet (nahazo ny “Tremplin Jazz” 2010) sy ireo maro hafa.
Tamin’io fotoana io koa no nanolorana ny mari-boninahitra “Kanto sy Soratra ary Kolontsaina” ho an’ireo mpanankato sangany tamin’ny fiangaliana Jazz avy amin’ny fitondram-panjakana Malagasy.
Ny hariva kosa dia notohizana tao amin’ny Buffet du Jardin ny “CABARET JAZZ” izay nahitana ny fandraisan’anjaran’i: Samy Andriamanoro, Solo Andrianasolo, Alain Nirinasoa, Datita Rabeson, Roger Zafera. Marihina fa nisy hetsika notontosaina ihany koa tany Miarinarivo- Itasy: Jazz Club CGM sy ny mpianatry ny ALABRI.
Andro iraisam-pirenena ho an' ny Dihy (29 Aprily 2015)
Ny Alarobia faha 29 Aprily 2015 no nanatanterahina ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny Dihy tao amin’ny Ivo-kolo CEMDLAC Analakely. Nanatrika izany fankalazàna izany ireo Solontena avy amin’ireo masoivoho miasa sy monina eto Madagasikara, ny Solontena avy ao amin’ny UNESCO, ary ireo tompon’Andraikitra ambony eto anivon’ny Ministeran’ny Kolontsaina sy ny Asatanana.
Nandritra io fotoana io dia nisy ny fandraisam-pitenana isan-karazany izay samy nanome lanja ny Dihy, ny famakiana ny hafatr’ i ISRAEL GALVAN, mpanora dihy voafidy hanolotra izany hafatra izany tamin’ity taona ity. “Loharan-kery sy fanovozana angovonaina ny dihy. Ny lalam-panafahana rehetra hita eo anivon’ny rohin-javamiaina dia toa misary endrin-dihy avokoa. Odiaina sy otrik’angovo ny dihy ary toy ny fiteny iraisana sy mampiray izao tontolo izao. “
Tao anatin’io fankalazana io, amin’ny maha andro iraisam-pirenena azy dia nisy ny dihy izay nataon’ireo mpanantalenta mpandihy sy ireo mpiangaly soradihy maro.
Andro maneran-tany ho an'ny fizakamanana ara-tsaina (26 aprily 2015)
Nandray anjara tamin'izany fankalazana izany ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny Asatanana tamin'ny alalan'ny rantsamangaikan'ny Ministera, dia ny OMDA. "Ny rehetra ho an'ny Mozika" na "Tous pour la musique", io no foto-kevitra nomen'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny Fizakamanana ara-tsaina na ny OMPI any Genève tamin'ity taona ity. Nafana dia nafana ny fankalazana, satria ankoatr'ireo fifandimbiasam-pitenenana izay nataon'ireo tompon'andraikitra ambony, dia nanafana ny lanonana ny mpitsoka mozikan'ny Governemanta sy ireo artista marobe. Tamin'izany koa no nanoloran'ny Ministera akanjo ara-panatanjahan-tena ho an'ny baolina kitra nomena ny artista sy ny ekipan'ny OMDA, izay nifanitsana tamin'ity andro manokana ity. Ny masoandro maty no nampalahelo tamin'izao fankalazana izao.
Tafatafa tamin'ny mpanao gazety (22 aprily 2015)
Nampiantso mpanao gazety ny Minisitry ny Kolontsaina sy ny Asatanana ny Alarobia faha 22 Aprily 2015 lasa teo tao amin’ny efitrano Rado, tranombokim-pirenena Anosy izay misy ny biraon'ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny Asatanana.
Mahakasika indrindra ny fampiantoana ny fifanarahana natao tamin'ny orinasa “October films” no anton’ny resaka.
Tsy nanara-dalàna ity orin’asa ity hoy ramatoa Ministra, nohon'ny tsy fisian'ny taratasy mazava manome alàlana ity orin'asa vahiny ity haka sary eto Madagasikara. Mba ho fitandroana ny fihavanana misy eo amin’ny firenentsika sy ny firenen-dehibe anefa, dia nisy ny fifanarahana natao. Vokatr’izany, dia afaka nanohy ny asany izy ireo ny 20 Martsa tao amin'ny nosy Sainte Marie. Naato indray izany ny 13 Aprily teo nohon’ny fampiasan’izy ireo milina izay tsy tafiditra tao anatin'ny fifanarahana.
Noraisina izao fanapahan-kevitra izao ho fisorohana ny gaboraraka hoy i Ramatoa Minisitra satria rahateo, misy ny fifanarahana iraisam-pirenena izay miaro ny vakoka anaty ranomasina, nankatoavin’ny Madagasikara tamin’ny taona 2001.
Nanao antso avo Ramatoa Minisitra ny hanomezan-danja ny Vakoka, ny Harentsaina sy ny Kolontsaina Malagasy. “Adidin’ny tsirairay ny miaro ny harem-pirenena mba tsy ho anjakan’ireo vahiny fotsiny”.
« Festival Sahoby », io no anarana nampitondraina ny hetsika izay nokarakarain’ny OFNAC na ny « Office National des Arts et de la Culture » rantsamangaikan'ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny Asatanana ho fampahafantarana ny boky izay navoakan’ireo Poeta 25 mianadahy, tanora mivondrona ao anaty fikambanana isan-karazany ka nampitondrain’izy ireo ny lohateny hoe « ROMBOM-PANAHY ». 83 no isan’ireo tononkalo voarakitra ato anatin’ity boky ity.
Ny fanotana ny boky toy ity "Rombom-panahy" ity no anisan'ny sehatra ahafahana manampy ireo Artista hamoaka ny sangan’asany sy haneho ny talentany.
Ny fizotry ny hetsika - 03 Aprily 2015 : Fampahafantarana ny mpanao gazety momba ny boky « rombom-panahy » - 08 aprily 2015 maraina CEMDLAC Analakely : Fampirantiana "Fafana" ho fampahafantarana ireo tanora 25 mianadahy, poeta vao misondrotra - 08 aprily 2015 hariva : « Antsa tononkalo » famelomana an-tsehatra ny tononkalo ao anatin’ny boky « Rombom-panahy ». - 15 aprily 2015 maraina : Fampirantiana "fafana", "Antsa tora-po" sehatra malalaka ho an’ny rehetra nahafahan’ny mpanoratra, poeta, olon-tsotra niantsa tononkalo. - 15 aprily 2915 hariva : « Haintsikera » nanasana ny Akademia sy ireo Mpanoratra, Poeta zokiny ka nanomezan'izy ireo torohevitra sy fampaherezana ireo tanora 25 mianadahy ireto.
Mbola hitohy ny hetsika hoy ny nambaran’i RIMA, tanora iray ao anatin’izy 25 mianadahy, anisan’izany ny hitondrana ireo asa soratra ireo any amin’ny faritra.
Fivorian' ny Staff (09-04-2015)
Notanterahina tao amin’ny tranombokim-pirenena ny Alakamisy faha 09 Aprily 2015 maraina lasa teo ny fivorian’ny Staff eo anivon' ny Ministeran' ny Kolontsaina sy ny Asatanana izay notarihin-dRamatoa Ministra ka natrehan’ny Talen'ny Kabinetra, Sekretera Jeneraly, Tale Jeneraly, Tale sy ireo sefon' ny sampan-draharaha, ary ireo Sekretera rehetra. Izany no natao, dia ny mba ho fanamafisana ny vinan’ezaka ao anatin’ny 100 andro sy mba hanatsarana ny fomba fiasa eo anivon’ny Ministera.
- Ho an’ny foiben’ny Asatanana dia ny hamitana ny « Code de l’Artisanat », mba hanomezan-danja ny sehatry ny Asatanana eto amin’ny firenena.
- Ho an'ny Kolontsaina, ny fanamboarana ny simba ao amin'ny Rovan'Andafiavaratra, ny tsy maintsy hampahafantarana ny Vakoka Malagasy eo amin’ny fiaraha-monina, ka ny fanomezana fanazavana an-tsary sy soratra ireo vakom-pirenena miisa 168 no dingana atao ao anatin'ny 100 andro. Ny tantaram-pirenena no maha firenena ny firenena, ary tsy maintsy asiana lanjany ny Kolontsaina izay anisan’ny mampiavaka ny firenentsika amin’ny firenena hafa.
Noresahin-dRamatoa Ministra koa ny fanatsarana ny asan’ny tsirairay eo anivon’ny Ministera.
Fampirantiana mikasika ny Tropy Jeannette (02 Aprily 2015)
Ny « TROUPE JEANNETTE » izay nanamarika ny faha 120 taona nahaterahan’ANDRIANARY RATIANARIVO ; ny faha 100 taona nahaterahan’i CHARLES RAVALOSON ary ny faha 90 taona nahaterahan’i ANDRIAMBALA JOSEPH.
Naseho tamin’ny endrika fampirantiana izany. Hita tao ohatra ny momban’ny tantaram-piainan’ireto farany satria anisan’ny olona nanana ny maha izy azy teo amin’ny sehatry ny teatra Malagasy izy ireo.
ANDRIANARY RATIANARIVO, teraka tany Ambatolampy tamin’ny 02 Aprily 1895 no nanangana ny tropy Jeannette niaraka tamin’ny Jeannette sy mpiantsehatra vitsivitsy ny taona 1929. Mpitendry zava-maneno, mpamoron-kira ary mpitarika ny tropy Jeannette izy.
CHARLES RAVALOSON, teraka tamin’ny 11 desambra taona 1915 tany Mananjary, Filoha lefitry ny “Association des Directeurs et Artistes des troupes professionnelles du théâtre Malagasy ny taona 1951 ka hatramin’ny 1959. Mpandrindra an-tsehatra, mpiantsehatra ary mpitarika ny Tropy Jeannette tamin’ny taona 1964 ka hatramin’ny 1985. Filohan’ny fikambanana Mpanao Teatra Malagasy na ny FMTM ihany koa izy ny taona 1959 hatramin’ny 1985.
ANDRIAMBALA Joseph teraka tamin’ny 19 septembra 1925 tao Ambanin’Ampahamarinana Antananarivo; nandray anjara tao amin’ny Tropy Jeannette ny taona 1951; nisahana ny fikarakarana ny fampisehoana ny 1964 hatramin’ny 1972; mpanamarim-bola tao amin’ny Fikambanana Mpanao Teatra Malagasy ny taona 1972 ka hatramin’ny 1998; mpitam-bolan'ny mpanao teatra Malagasy ary talen’ny tropy Jeannette ny 1985 rehefa maty i Charles Ravaloson.
Nampirantiana tao ihany koa ny sarin’ny teatra izay nolalaovin’ny tropy Jeannette taloha sy ny sarin’ireo mpiantseatra rehetra.
Notanterahina tao amin’ny efitrano Gisèle Rabesahala tao amin’ny tranombokim-pirenena Anosy nanomboka ny 02 Aprily 2015 ny hetsika. « TSY RARAKA NY ILO – TAFITA NY FANILO » io no teny faneva nentina nanamarika io fotoana io.
Anisan’ny tanjona tamin’ity hetsika ity ny hamelomana imaso indray ny Teatra Malagasy izay nisedra olana ny nohon’ny fahasimban’ny Tranompokonolona Isotry izay hany toerana nanehoana ireo sangan'asa. Ny taona 2010 no nisehatra farany tao amin’io toerana io ny mpanao teatra.
Ramatoa Brigitte Rasamoelina, Minisitry ny Kolontsaina sy ny Asatanana no niahy ny hetsika.
Andro eran-tany ho an' ny teatra (27 Martsa 2015)
Nohon’ny Andro eran-tany ho an’ny Teatra dia nisy ny hetsika natao tao amin’ny Ivokolo CEMDLAC Analakely ny maraina ny Zoma faha 27 martsa 2015 lasa teo ; izay nokarakarain’ny Fikambanan’ny mpanao teatra Malagasy. Nanatrika izany ireo tompon’andraikitra samihafa eo anivon’ny Minisiteran’ny Kolotsaina sy ny Asatanana, izay notarihin-dRamatoa Minisitra Brigitte Rasamoelina.
Na teo aza ny olana nosedrain’ny mpanao Teatra, dia mbola ao andamosin'izy ireo mandrakariva ny Minisiteran’ny Kolontsaina sy ny Asatanana.
Nanafatrafatra ny mpianatra nanatrika io fotoana io, mba hampita amin’ny mpiara-mianatra sy namana hitia ny Teatra, sy ny tokony hanomezan-danja ny teatra izay sokajiana ho isan’ny Kolontsaina ary indrindra ny fangatahana ny tompon’andraikitra samihafa mba hamelona indray ny kolontsaina Malagasy, ny lahatenin'ny Ministra mpiahy.
Nizara roa ny fotoana nandritra io hetsika io, ka ny filalaovana Teatra mitondra ny lohateny hoe : « ADY ANATY », nosoratan’i Regis Rajemisa Raholison no seho voalohany, izay nolalaovin'ny Sakaizan’ny teatra malagasy mpianatra ao amin’ny ENS Ampefiloha.
Ny faharoa dia fandefasana sombin-tseho na koa “théatre filmé” izay teatra maromaro fahiny nolalaovin’ny « Troupe Jeannette ».
Natao ho an’ny sarangan’olona rehetra sady mbola misy hatrany ny Teatra Malagasy.
Andro maneran-tany ho an’ny Angano sy ny tononkalo 2015
Notanterahina tao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy ny Asabotsy 21 martsa 2015 teo ny lanonana ofisialy ho fankalazana ny andro eran-tany ho an’ny Angano sy ny tononkalo. Tonga nanatrika izany lanonana izany ny Sekretera jeneraly ny vaomeram-pirenena Malagasy hoan’ny UNESCO, ny mpanolontsaina ao amin’ny Ministeran’ny fampianarana, sy ireo tompon’anraikitra ambony eto anivon’ny Ministeran’ny Kolontsaina sy ny Asatanana izay notarihin-dramatoa Minisitra Brigitte Rasamoelina.
Ny Sekretera Jeneralin’ny Vaomieram-pirenena malagasy ho an’ny « UNESCO » no naamaky ny tenin’ny talen’ny « UNESCO ».
Rehefa izany, dia nandray anjara tamin’ny alalan’ny Antsa tononkalo mitondra ny lohateny hoe : "mana-kierana" sy Hainteny izay nampitondraina ny lohateny hoe : "Bodo manitra" ny Federasiôna mpikalo ny teny sy ny soratra avy any Avaradrano.
Tamin'ny lahatenin-dRamatoa Brigitte Rasamoelina Minisitry ny Kolontsaina sy ny Asatanana no nilazany fa, mendrika hampiroboroboana ny Literatiora. "Ny haren-teny!... mikolo ny fisainana, mampandroso ny fiainana" io no lohahevitra tamin'ity taona ity. Tamin'ny famaranana ny lahatenin-dRamatoa Ministra no niventesany ny tononkalon’i Elie Rajaonarison mitondra ny lohateny hoe: “Gasikara”.
Taorian’izay dia nanatanteraka ny fiantsana ny tononkalo nosoratany i Haingo mpanoratra sy poeta izay nampitondrainy ny lohateny hoe: «Satria ».
Nanamarika ity hetsika ity ny fanoloran’ny Ministeran’ny Kolontsaina sy ny Asatanana ireo marim-pankasitrahana ho an'ny mpianatra tao amin’ny Lycée J J Rabearivelo.
Azo ambara fa fahombiazana ny hetsika sy ny lanonana notanterahin’ny Ministeran‘ny Kolontsaina sy ny Asatanana ho fankalazana ny andro eran-tany ho an’ny Angano 20 Martsa sy Tononkalo 21 Martsa izay marihina fa efa nanomboka ny Alarobia 18 Martsa 2015.
Andro iraisam-pirenena ho an' ny Teny Reny (21 Febroary 2015)
Nanomboka ny 18 febroary ny hetsika tao amin’ny CENTRE MEDICO SOCIAL ET EDUCATIF BETANIA Ankasina; toeram-panabeazana ankizy sahirana miisa 700 mahery. Ramatoa RABARISON Laure, Talen’ny Teny sy ny Soratra no nanokatra ny fotoana, ka napetraka tamin’ireo ankizy mpianatra ny fanontaniana hoe « Inona no atao hoe teny Reny ». Tsy vitsy ireo ankizy no naneho ny heviny, tao no niteny hoe tenin-drazana ny atao hoe TENY RENY, tao koa no nilaza fa hoe tenim-pirenena. Rehefa izany dia nanazava ny tena dikan’ny TENY RENY ny talen’ny Teny sy Soratra.
Taorian’ny fanokafana dia nanentana ny ankizy, ny “Ministeran’ny Kolontsaina sy ny Asatanana” tamin'ny alalan'ireo mpiara-miasa. Nampandraisaana anjara tamin’ny alalan’ny ankamantatra sy Tsianjery ireo ankizy. Nisy koa ny fitantaràna angano sy fampianarana ny ankizy ny fahalalam-pomba.
Ny tanjona dia ny mba ampiasan’ny ankizy ny TENY RENY amin’ny alalan’ny kilalao Malagasy samihafa.